InfoComm 4097 မှာ DPA မိုက်ခရိုဖုန်းမိတ်ဆက် 2019 Choir မိုက်ကရိုဖုန်း - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » InfoComm 4097 မှာ DPA မိုက်ခရိုဖုန်းမိတ်ဆက် 2019 Choir မိုက်ကရိုဖုန်း
InfoComm 4097 မှာ DPA မိုက်ခရိုဖုန်းမိတ်ဆက် 2019 Choir မိုက်ကရိုဖုန်း
ALLEROD, ဒိန်းမတ်, ဇွန် 12, 2019 - DPA မိုက်ကရိုဖုန်း အဆိုပါ၎င်း၏မိုက်ခရိုဖုန်း lineup အသစ်ဖြည့်စွက်အစမ်းကြည့်နေသည် 4097 ဓိက Supercardioid Choir မိုက်ကရိုဖုန်း InfoComm 2019 (မှာBooth 6861) ။ ကိုးကှယျခွငျးနဲ့ choir applications များ၏အိမ်တော်အဘို့စံပြ, အ 4097 အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ဃကဲ့သို့တူညီသော Sonic အရည်အသွေးတွေကိုထောက်ပံ့ပေး: မဲ™ ဓိက 4099 စာရွက်စာတမ်းမိုက္ကရိုဖုန်းဒါပေမယ့်ကြိုးမဲ့သို့မဟုတ်ကြိုးနှစ်ခုလုံးကို configurations အတူပြောင်းလဲနေသော choir သံကိုဖမ်းယူဖို့အထူးဒီဇိုင်းခဲ့သည်။
အသစ် 4097 Choir မိုက်ကရိုဖုန်းလည်း DPA ရဲ့ကျော်ကြားသောအပြား Off-ဝင်ရိုး supercardioid ပုံစံတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်, ရှိသမျှ DPA မိုက်ခရိုဖုန်းကဲ့သို့မရရှိနိုင်ပါဆုံးသဘာဝအ-မြည်ဖြေရှင်းနည်းများတဦးဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းဟာအလွန်မြင့်မားသောအမြတ်-မတိုင်မီ-တုံ့ပြန်ချက်ရှိပြီး, ကြောင့် DPA အဘို့အကျော်ကြားသော Off-ဝင်ရိုးဝိသေသ၎င်းထိုသို့တစ်ခုလုံးကို choir သဘာဝကအသံစေသည် - ဝင်ရိုးပေါ်မယ့် - ပေမယ့်အားလုံးထောင့်ကနေ။ သူကအလွယ်တကူ choir ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုရောမွှေနှင့်မညီမညာဖြစ်နေသောမိုက်ပုံစံကောက်-Up ထဲကနေဖန်တီးပိုငျးကိုတိုက်စရာမလိုဘဲအတူတူကအားလုံးကိုရောနှောနေခြင်းနိုင်ပါတယ်အတိုင်းဤအသံအင်ဂျင်နီယာဘို့လွယ် choir အပေါ်မျိုးစုံ MICS သုံးပြီးစေသည်။
"ကျနော်တို့ဒီနှစ် InfoComm မှာစက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များမှကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်မိုက်ခရိုဖုန်းဖြေရှင်းချက်မိတ်ဆက်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်" ဟု Rene Mørch, ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ, DPA မိုက်ခရိုဖုန်းကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့က၎င်း၏မျိုး၏အခြား MICS ထက်သေးငယ်သည်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ဦးအလင်းနှင့်ကြော့ကြည့်ရှိပါတယ်တဲ့ချောမွေ့ပြောင်လက် choir မိုက်ခရိုဖုန်းဒီဇိုင်းသို့အချိန်အများကြီးထားတော်မူ၏။ ရှိသမျှသည်အခြားသော DPA MICS ကဲ့သို့တူညီသော Sonic ဇာတ်ကောင်နှင့်တကွ, 4097 Choir မိုက္ကရိုဖုန်းသုံးစွဲသူများက DPA ကနေမျှော်လင့်လာကြပြီသောမြင့်မားတဲ့စံနှုန်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ "
တစ်ဦး MicroDot connector ကိုများနှင့်ကြိုးသို့မဟုတ်ကြိုးမဲ့များအတွက် DPA adapter နဲ့ configured, အ 4097 တူညီသောနေရာအများအပြားအသုံးပြုမှုရှိနေလျှင်စင်မြင့်ပေါ်မှာအကြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့, အသုံးပြုသူကြိုးမဲ့သွားကြဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ က choir စင်မြင့်ကိုယူဘို့အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါ, ရိုးရှင်းစွာတာဝန်ပေးအပ်အစက်အပြောက်အတွက် 4097s နေရာကသွားရဖို့အဆင်သင့်ပါ!
ကပုံပျက်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေနှင့် dynamic range ကိုချဲ့ထွင်အဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသံကိုအောင်မြင်နေသည် DPA အသံချဲ့စက်ကနည်းပညာအားဖြင့်ဓိက featuring ။ ထို့ပြင် 4097 စင်မြင့်ပေါ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြခဲ့ကြသည် secure မှသုံးစျေးမှာတောင်ပေါ်ပါဝင်သည်, ထိရောက်စွာ damped နှင့် MICS ဤမျိုး၌တခါမဟုတ်သောအဆင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
DPA မိုက်ခရိုဖုန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ် application များအတွက်အရည်အသွေးမြင့် condenser မိုက်ခရိုဖုန်းဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ဒိန်းမတ် Professional ကအသံထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ DPA ရဲ့အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်တိုက်ရိုက်အသံတပ်ဆင်ခြင်း, အသံဖမ်း, ပြဇာတ်ရုံနဲ့ထုတ်လွှင့်တို့ပါဝင်သည်သမျှသောက၎င်း၏စျေးကွက်များအတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောမိုက်ခရိုဖုန်းဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ၎င်း၏ဖောက်သည်များကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမှကြွလာသောအခါ, DPA မျှ shortcuts တွေကိုကြာပါသည်။ မဟုတ်သလိုဒိန်းမတ်အတွက် DPA စက်ရုံမှာပြုထားတဲ့သူ့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ကုမ္ပဏီကစေ့စပ်ညှိနှိုင်းပါဘူး။ ရလဒ်အဖြစ် DPA ၏ထုတ်ကုန်တကမ္ဘာလုံးဟာသူတို့ရဲ့ခြွင်းချက်ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်မြင်သာ, မတူနိုင်တဲ့သတ်မှတ်ချက်များ, အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်, ရှိသမျှအထက်, စင်ကြယ်သော uncolored နှင့် undistorted အသံကချီးကျူးနေကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.dpamicrophones.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ သံပြိုင်တေးဆိုသူလူစု ဓိက 4099 DPA မိုက်ကရိုဖုန်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor မိုက်ခရိုဖုန်း ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-06-12
ယခင်: Solotech Blackmagic ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ Mont-Méganticအမျိုးသားဥယျာဉ်အဘို့အ 12G-SDI လုပ်ငန်းအသွားအလာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော
နောက်တစ်ခု: ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုကနေအပြင်နယူး Switcher ကိုသတ်မှတ်ရန်ဟာဝယေံထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ 4K ထုတ်လုပ်မှုစှမျး